Kwenzeka njani ukuba ugcine imiyalezo kwiTelegram | I-Androidsis
I-Telegraph yaziwa ngokuba yenza umsantsa phakathi kwabasebenzisi be-Android njengenye ye ezona nkqubo zilungileyo zokuthumela imiyalezo. Ihlaziywa rhoqo ngokwazisa imisebenzi emitsha, kutshanje utshintshe uyilo lwayo. Yinkqubo enokusinika amathuba amaninzi. Enye yazo kukugcina imiyalezo esiyithumeleyo okanye esiyithumeleyo.
Ngale ndlela, ukuba umntu ukuthumelela umyalezo onolwazi olunomdla, njengedilesi okanye inombolo yefowuni, ungagcina lo myalezo kwiTelegram. Unokwenza oku kunye neefoto abazithumelela zona. Ke, ngekhe ulahlekelwe lolu lwazi kwaye luhlala kwisicelo.
Inyani yile yokuba iTelegram iyasivumela ukuba senze izinto ezininzi ngemiyalezo, indlela yokwenza ibonakale. Kule meko, into esiyifunayo kukukwazi ukubasindisa. Ukwenza oku, kuya kufuneka ufake usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android kunye khangela umyalezo loo nto inomdla kuwe.
Ke cofa ubambe umyalezo obuzwayo. Uya kwandula ke ubone ukuba phezulu kwesikrini ufumana uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo, kunye nezinto onokuzenza ngalo myalezo. Olunye uphawu olunjalo oluphumayo lutolo olukhombe ngasekunene. Ngumqondiso osithandayo, ke kufuneka ucofe kuwo.
Ngokwenza oku, iTelegram iyasithumela kwakhona kwiscreen sasekhaya, apho sinazo zonke izingxoxo. Apho siza kufumana incoko entsha, ibizwa ngokuba yiMiyalezo egciniweyo. Kulapho siza uncamathisela lo myalezo, ukuze ugcine. Ke ngoko, kuya kufuneka ucofe incoko leyo. Nantsi indlela umyalezo ekulo mbuzo ugcinwa ngayo.
IPodemos Phinda le nkqubo ngayo yonke imiyalezo enomdla kuthi kwiincoko kwiTelegram. Kwakhona neefoto okanye iividiyo ezithunyelwa ngabanye abantu kwi-app, ngokulandela inkqubo efanayo kuzo zonke iimeko. Njengoko ubona, kulula kakhulu ukufumana usetyenziso oludumileyo lwe-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyigcina njani imiyalezo kwiTelegram
I-Snapdragon 855 ilinganiswe kwiGeekbench njengeyona SoC ikhawulezayo kuzo zonke
Eyona midlalo ilindelwe kakhulu kwi-Android ngo-2019